Qoysas danyar oo loo qeybiyay lacago ay ku shaqeystaan – Radio Muqdisho
Qoysas danyar oo loo qeybiyay lacago ay ku shaqeystaan
Hay’adda badbaadada carruurta iyo haweenka ee SSWC ayaa maanta waxa ay 20 haween ah u qeysbisay lacag, taasi oo ay ugu talagashay inay ku maareeyeen noloshooda.
Deeqdan lacagta ah ee loo qeybiyay 20-ka haween ee ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ayaa midkiiba la siiyay $500, iyadoo munaasabadii qeybinta lacagta ay goob joog ka ahayeen agaasimaha Hay’adda badbaadada carruurta iyo haweenka ee SSWC, Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka, xubno ka socday Wasaaradda Haweenka, Ururrada bulshada rayidka ah, waxaana deeqdan lacagta ah bixisay hay’adda Axmed Nuur Foundation, iyadoo ay fulisay hay’adda SSWC.
Agaasimaha Hay’adda badbaadada carruurta iyo haweenka ee SSWC Aamino Xaaji Cilmi ayaa sheegtay in lacagtan loogu talagalay in haweenka ay ku shaqeystaan, kuwaasi oo isugu jira kuwa horey tacadiyo kala duwan loo geystay iyo kuwa kale, waxaana ay intaa ku dartay in haweenkan ay horey u siiyeen siminaaro ku saabsan xirfado ay ku shaqeystaan,.
Sidoo kale haweenkii loo qeybiyay lacagta ayaa ka mahadceliyay kaalmada la siiyay
Qaar ka mid ah ururrada bulshada rayidka ah iyo xubno ka socday Wasaaradda Haweenka oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay inay tahay wax lagu daysado talaabada maanta haweenka lagu guddoonsiiyay lacago loogu talagalay inay ku maareeyaan noloshooda
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuuli Sheekh Axmed Gabale oo ka hadashay muaasabadii ay Hay’adda badbaadada carruurta iyo haweenka ee SSWC lacagta ugu qeybineysay haweenka danyarta ah ayaa waxa ay xustay in dhibaatooyinkii dalka ka dhacay ay saameeyn ku yeesheen dumarka.
Hay’adda SSWC oo u taagan badbaabada carruurta iyo haweenka ayaa ah hay’ada ka shaqeyso wax u qabashada dumarka iyo carruurta, iyadoo dhawaan 8-boqol haween ah bartay xirfado ay ku shaqeystaan.
Qaban qaabada soo dhaweynta Wafdiga Ra’iisul wasaaraha oo ka socoto Dhuusamareeb
Wasaaradda Kalluumaysiga oo sheegtay in ay soo saarayso Sharci cusub